Honda CR-V 2013 (#593504) ကို Tachileik မြို့နယ်တွင်ရောင်... | CarsDB
Lot Number: #593504
****Cars DB တွင်ကြော်ငြာထားသောကားဟု ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။တာချီလိတ်တွင် ကားလာရောက်ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါသည်။ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။မော်တာထိုင်ခုံ၂ ဖက်ရှိသည်။
Honda CR-V moble 2013 engine power 2400cc 4x4 petrol.
Good condition ,Power steering, Power windows, Air bags, steering volume control, Air con, back camera, push start, smake key.
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) SKMM Auto Car မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Honda CR-V 2013 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။